Amakhasino E-inthanethi Amasha Ningizimu Afrika
Ikhaya / amakhasino e-inthanethi amasha ningizimu afrika
Isidingo samakhasino e-inthanethi sikhuphuke ngamandla eminyakeni engu-5 edlule. Futhi i-COVID-19 ise leso siding ezingeni elilandelayo, nabadlali abafuna ezinye izindlela eziphephile kunezindlu zamakhasino nezitolo zokubheja. Ngenxa yalokhu, amasayithi amakhasino amasha asungulwa njalo ngenyanga eyodwa ukuhambisana nesidingo.
Ukulandelela wonke la makhasino amasha sha sekube nzima kunakuqala – inkinga yenala! Ungesabi – silapha ukukusiza ukuthi uthole umhlahlandlela ophelele wamakhasino angene kamuva imakethe yaseNingizimu Afrika yokugembula ngo-2021. Sibheke ukuthola amakhasino e-inthanethi amasha kakhulu, amakhasino amasha eselula, namabhonasi amahle!
Umashi 2021 Amakhasino E-inthanethi
R6,000 Welcome Bonus + 20 Free Spins
750% Welcome Bonus & 110 Spins + 25 Free Spins no Deposit
Ibhonasi engu-100% kuze kufike ku-R3000 + 25 Bhonasi Lokwamukela
100 ama-spins wamahhala ayamukela ibhonasi
Ibhonasi yomdlalo engu-200% efinyelela ku-R15,000
Slotty Way Review
200% Ibhonasi Yokwamukela + 50 Yemijikelezo Ibhonasi Elingadingi Diphozithi
100% kuze kufike ku-R3,000 Ibhonasi + 100 Imijikelezo yamahhala
PocketPlay Casino Review
I-100% ifinyelela ku-R25,000 + 50 i-Mijikelezo Yamahhala
750% Ibhonasi & 110 Imijikelezo + 25 Imijikelezo engana Diphozithi
100% Ibhonasi yomdlalo + 100 Yemijikelezo
100% Bhonasi Kwi Diphozithi Yokuqala
150% Ibhonasi Yomdlalo + 50 Yemijikelezo
R250 Ye No-Deposit + 100% Ize ifike R10,000 ne 100 ama-spins
20 Izikhathi Zokudlala Mahhala
100% Webhonasi Yomdlalo Ize Ifike R3,000
400% Ibhonasi Yomdlalo + 100 Ama-Free Spins
100% Webhonasi Ize Ifike R10,000/5 BTC + 200 Ama-Free Spins
100% Webhonasi Yomdlalo Ize Ifike R3,000 + 100 Ama-Free Spins
100% Webhonasi Yomdlalo Ize Ifike R1600 + 100 Ama-Free Spins
Wild Cashback Ibhonasi
200% Webhonasi Yomdlalo Ize Ifike R30,000 + 20 Izikhathi Zokudlala
Izizathu Ezingu-5 Zokujoyina Nokudlala Emakhasino Amasha
Wonke umuntu uthanda amakhasino e-inthanethi amasha sha! Nazi izizathu ezinhlanu zokuthi kungani kufanele uzame inhlanhla yakho emakhasino amasha njengomdlali waseNingizimu Afrika:
1. Amabhonasi Amahle
Emizamweni yawo wokuthola ukunakwa ngabadlali abasha, amakhasino amasha e-inthanethi aziwa ngokunikeza amabhonasi okukwamukela amangalisayo namabhonasi ediphozithi engekho amangalisayo nama-spin amahhala.
Uma ufuna ukufinyelela ngokushesha kuzindawo zakamuva zama-slot evidiyo ku-inthanethi, amakhasino akamuva angakusiza kakhulu. Imvamisa iphatha imidlalo yesimanje evela kubadayisi abadumile.
3. Isofthiwe Ebuyekeziwe
Amakhasino amaningi amadala ajwayele ukuthatha isikhathi eside ukuze kuthuthukiswe amaplatifomu awo. Lokhu akuyona inkinga uma udlala kumasayithi amasha ekhasino – anikeza isipiliyoni sesimanje sokudlala, esiqinisekisiwe.
4. Ubunyoninco Bomklamo
Lokhu kubonakala ngokushesha uma uqhathanisa amakhasino amadala namasha – amasayithi amasha anezindikimba ezibukeka kangcono, izithombe ze-HD, nokuhlelwa kwesimanje. Ngokubukwa okuhle kakhulu kuzikrini ze-HD ne-4K, amakhasino amasha ahlala engcono kunalawo amadala.
5. Ukuphepha Okuhle
Izingozi ezintsha kanye nezingozi zokuvikeleka zitholwa njalo ku-inthanethi. Udinga izici zakamuva zokuphepha namathuluzi okuguqula idatha ukuqinisekisa ukuthi idatha nemali yakho kuhlala kuphephile ekhasino – maningi amathuba okuthola lezi zici emakhasino amasha sha.
Amakhasino Ahambe Phambili Onyaka Odlule
U-2021 bekungunyaka oyinselelo kuwo wonke umuntu emhlabeni. Kepha impilo isaqhubeka ngandlela thile, futhi kwamiswa amakhasino amasha amaningi ku-inthanethi nyakenye. Nakhu ukubheka ngokushesha amanye amasha angenakulibaleka, abhalwe ngendlela engahleliwe:
GSlot Casino – Ikhasino enezibane ze-neon iza nelayisense yase-Malta nemidlalo evela kubadayisi abehlukene abangaphezulu kuka-30, kubandakanya iPragmatic Play, i-QuickSpin ne-Red Tiger. Kuqinisekise ukukhokhelwa okusheshayo ngezimali eziningi zomhlaba, kubandakanya i-ZAR.
Lucky Draw Casino – Ngendikimba elula eluhlaza okwesibhakabhaka nemidlalo eminingi ye-Betsoft, le khasino ibhekele abadlali abavela ezimakethe ezinkulu ezifana ne-Australia neNingizimu Afrika. Ikhasino isebenza ngaphansi kwelayisense yase-Curacao.
GreatOdds Casino – Ikhasino egxile e-Afrika enelayisense evela e-Curacao, e-Ghana nase-Zambia, eza ixhunywe ne-sportsbook ye-inthanethi yanamuhla. Isigaba sekhasino sinikela ngemidlalo yomdayisi obukhoma, ama-slot, neminye imidlalo yokugembula evela kubadayisi abanjenge-Pragmatic Play. BetPat Casino – Indawo ekhangayo yokugembula ku-inthanethi enendikimba yase-Ireland, iBetPat isebenza ngaphansi kwelayisense yase-Curacao. Inamakhulu emidlalo nama-slots avela kubadayisi abaningi, kubandakanya i-Netent, i-Microgaming ne-Betsoft. I-ZAR iyasebenza. Casoola Casino – Enye ikhasino enelayisense yase-Malta, lena nayo yaqinisekiswa yi-UK Gambling Commission. Ibinendikimba ekhanyayo ebomvu futhi ephuzi nemidlalo ye-Netent. Abadlali baseNingizimu Afrika bamukelekile futhi ikhasino isekela iZAR.
Inqubo Yethu Yokubuyekeza Uma Sifaka Amakhasino Amasha
Lapha e-OnlineCasinosOnline.co.za, sizama ngamandla ethu wonke ukuqinisekisa ukuthi abafundi bethu bathola ukufinyelela kumakhasino e-inthanethi amasha amahle kakhulu atholakalayo. Ochwepheshe bethu bahlala bezingela amasayithi ekhasino akamuva asungulwa njalo ngenyanga. Ngemuva kwalokho babheka isayithi ngayinye ngenqubo eqinile yokuhlola.
ASITHATHI noma iyiphi ikhasino ye-inthanethi ngobuso – zonke izimangalo zayo ziyahlolwa kunqubo yethu yokubuyekeza. Ngale ndlela, singakulethela lezi zingosi ngokuphepha, balandeli bethu ababalulekile. Ukuqinisekisa ukuthi uthola isipiliyoni sokugembula esiphephe kakhudlwana, sihlola isayithi ngayinye ukuthola izici ezithile.
Amasayithi kuphela adlulisa lolu hlu olunzima afakwa kusayithi yethu. Ukuze ufunde kabanzi ngalezi zici ezibalulekile, hlola isigaba esilandelayo sohlu lwethu lokuhlola izici ezibalulekile zamakhasino.
Futhi uma ucabanga ukuthi lokho bekungukuphela kwenqubo, cabanga futhi! Ukubuyekezwa kwethu kuhlala kungumsebenzi oqhubekayo – amakhasino e-inthanethi aqhubeka engeza izici ezintsha ngaso sonke isikhathi. Ukuqinisekisa ukuthi uthola ukubuyekeza kwekhasino okuhambisana nesikhathi nokunembile, sivakashela ikhasino ngayinye ngezikhathi ezithile ukuhlola izici ezilandelayo:
Izipesheli zokukwamukela zakamuva, Amabhonasi Ediphozithi Engekho, nama-Promoshini Esizini
Ama-slot nabadayisi bemidlalo abasha sha
Noma yiziphi izinguquko kumigomo nemibandela yekhasino
Amalayisense amasha, nezinguquko kulawo akhona
Uhlu Olusha Lokuhlola Amakhasino
Ochwepheshe bethu bathembele ohlwini olujwayelekile lokuhlola lapho bebukeza ikhasino ye-inthanethi entsha. Uma isayithi ingenazo lezi zici ezibalulekile ezishiwo ngezansi, ayishicilelwa noma ithuthukiswe kuplatifomu yethu.
Ikhasino kufanele ibe nelayisense yokugembula esebenzayo komunye walezi ziphathimandla ezaziwayo – i-UK Gambling Commission, i-Malta Gaming Authority, i-Curacao eGaming License (iDirexNV, Antillephone njll) i-Gibraltar, i-Alderney, noma i-Kahnawake, ukubala amalayisensi amakhulu ekhasino. Ngokuvamile, sigwema wonke amakhasino e-inthanethi asebenza engenayo ilayisense.
Ikhasino kufanele inikeze inqwaba yezindlela zokukhokha eziphephile nezaziwayo. Sinaka izindlela zokukhokha ezilula e-SA. Ukuze ufunde kabanzi ngezindlela ezinhle kakhulu zokukhokha zamakhasino e-inthanethi ngo-2021, hlola umhlahlandlela wethu ojulile.
Uma ikhasino ingawamukeli amaRandi aseNingizimu Afrika (i-ZAR), abadlali baseNingizimu Afrika kungadingeka babhekane nezindleko ezengeziwe zokuguqula imali. Ukugwema le nkinga, sihlola uhlu lwezimali ezamukelekile ukubheka ukuthi ingabe kukhona i-ZAR.
Amabhonasi Okukwamukela Namanye Amabhonasi Amahle
Noma kungeyona into ebaluleke kakhulu, amabhonasi angakhuphula kakhulu isipiliyoni sakho sokudlala emakhasino e-inthanethi. Sihlola amakhasino e-inthanethi amasha amabhonasi ediphozithi engekho, amabhonasi okukwamukela, nokunye okunikezwayo okuhehayo nokuhlukile.
Isofthiwe Yekhwalithi Ephakeme Namageyimu Amaningi Ongawakhetha
Ikhasino kufanele iphathe kuphela imidlalo nesofthiwe evela kubadayisi abaziwayo. Sihlola ngokucophelela amakhasino athwala noma imuphi umdlalo ongaziwa noma ongavivinywanga. Siphinde sibeke amakhasino ngokuya ngobuningi nekhwalithi yemidlalo – ama-slot, ama-jackpot, imidlalo yomdayisi obukhoma, imidlalo yetafula, neminye.
Ikhasino kufanele inikeze imidlalo esebenza kahle kuwo wonke amakhompyutha, ama-iPhone, ama-iPad, amaselula e-Android namathebulethi. Uma kunama-app, siyawahlola kakhulu kumadivayisi amaningi. Uma kuyisayithi esheshayo, siyivivinya kuwo madivayisi ombili e-iOS ne-Android ukuqinisekisa ukuhambisana neselula okungu-100%.
Ikhasino kufanele inikeze isipiliyoni sokusekela amakhasimende esisheshayo futhi esinobungane. Ithimba kufanele litholakale 24×7 noma nini lapho kunokwenzeka, ngezindlela eziningi zokuxhumana – ngocingo, nge-imeyili, noma ngengxoxo ebukhoma.
Ihloniphe Ukudlala Okunomkhawulo
Ikhasino kufanele ibe sobala ngo-100% maqondana nayo yonke imigomo nemibandela, imithetho yebhonasi njll. Kufanele futhi ibe nenqubomgomo ebekwe kahle yokugembula, enamathuluzi anele anika abadlali amandla okulawula umsebenzi wokugembula kusayithi ( ukuvimbela ukulutha kwezokugembula).
Ukukhetha Ikhasino Yakho Entsha Ngokuhlakanipha
Kubalulekile ukuqaphela ngokufanelekile lapho ukhetha ikhasino ye-inthanethi. Ungahlala uthembele kuzibuyekezo zethu zochwepheshe lapho ungabaza – mane uchofoze kusixhumanisi esithi “funda isibuyekezo” esiduze kwanoma iyiphi ikhasino emakhasini ethu.
Uma uhlangabezana nekhasino entsha sha engaphandle kwamakhasi ethu, funa izici ezibalulekile ezishiwo ohlwini lwethu lokuhlola olungenhla – naka amalayisense, imidlalo evela kubadayisi abadumile, nezindlela zokukhokha ezivikelekile (okwazi ukufinyelela kuzo).
Futhi, ungalokothi ukhethe ikhasino ngokuya ngamabhonasi ayo – angakhohlisa ngezinye izikhathi, ngenxa yamaqhinga okudayisa anolaka. Futhi ikhasino ngayinye ihlukile ngokwendlela ezichaza ngayo izinto ezifana nemithetho yamabhonasi, ukudlala ngokungafanele, nezinqubomgomo zebhange.
Ngenxa yalokhu, sikweluleka ukuthi uhlale ufunda imigomo ejwayelekile yekhasino nemigomo yebhonasi ngokugcwele ngaphambi kokujoyina / ukusebenzisa noma iyiphi imali. Funda yonke imigomo etholakalayo ngokugcwele, futhi uxhumane nosizo lwamakhasimende uma unokungabaza. Joyina kuphela ikhasino othembela kuzici zayo ngo-100%.
Amakhasino E-inthanethi Amasha Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQs)
Ingabe amasayithi amasha ekhasino aphephile?
Amasayithi amasha ekhasino anamalayisense nabo-operetha abaziwayo aphephe ngokuphelele. Uma ikhasino ingenayo ilayisense, Ivela ku-operetha ongaziwa futhi ingenayo imidlalo evela kubadayisi abadumile, kufanele uqaphele ngoba kungaba yisayithi yokukhohlisa.
Ingabe amakhasino amasha angcono kunalawo amadala?
Yebo no Cha – kwezinye izici ezinjengesofthiwe yakamuva, imidlalo, namabhonasi, amakhasino amasha angcono kunalawo amadala. Kephanawo anobuthakathaka obuthile. Ukuntuleka kwerekhodi yomlando kuyinkinga enkulu – kuthatha iminyaka ukuthi amakhasino e-inthanethi athole idumela elithembekile.
Yini inzuzo yokujoyina ikhasino entsha?
Ikhasino entsha ifuna kakhulu ukuheha abadlali abasha. Ngakho-ke, ungalindela amabhonasi amahle namaphromoshini kulawa masayithi. Amakhasino anamabhonasi ediphozithi engekho ayisibonelo esihle. Lawa masayithi ekhasino avame ukuphatha ama-slot evidiyo akamuva nemidlalo. Futhi ajwayele ukuba nezici zokuphepha zakamuva.
Ingabe amakhasino amasha anama-app?
Ngokuvamile, impendulo ingucha. Imboni yokugembula ku-inthanethi isebenzisa amasayithi asheshayo. Amagama amakhulu anjengo-William Hilll no-Bet365 anama-apps. Amasayithi amakhasino amasha adlalwa ngokuphelele ngeziphequluli zamaselula – awadingi ama-app abizayo e-iOS ne-Android.
Ingabe imidlalo engaxhunyiwe ku-inthanethi inikezwa kumakhasino amasha?
Cha, amakhasino amasha ngokuvamile anikeza imidlalo eku-inthanethi kuphela. Udinga ukuxhumeka kwe-inthanethi okusebenzayo ngaso sonke isikhathi ukuze udlale kumakhasino akamuva.
Ngibhalisela kanjani amakhasino e-inthanethi amasha?
Ukubhalisela ikhasino ye-inthanethi entsha kuyinqubo elula. Vele uvakashele iwebhusayithi bese uchofoza inkinobho efanele ethi “Ngena Ngemvume” noma “Bhalisa” ngokuya ngekhasino. Gcwalisa ifomu lokubhalisa elivelayo ngokunikeza imininingwane enembile. Vuma yonke imigomo nemibandela futhi uqinisekisa ukuthi ungaphezulu kweminyaka engu-18 ukuvula i-akhawunti yakho. Ikhasino izothumela ikhodi yokuqinisekisa ku-imeyili/ifoni yakho. nemibandela futhi uqinisekisa ukuthi ungaphezulu kweminyaka engu-18 ukuvula i-akhawunti yakho. Ikhasino izothumela ikhodi yokuqinisekisa ku-imeyili/ifoni yakho.Sebenzisa ikhodi ukuqinisekisa i-akhawunti yakho. Manje usungangena ngemvume bese uqala ukudlala!
Ingabe izindlela zokubhenka ziphephile emakhasino akamuva?
Yebo, amakhasino e-inthanethi anamalayisense ahlala enezindlela zokukhokha eziphephe kunazo zonke, neziphephe kakhulu. Uma nje ukhetha amakhasino ngemuva kokuhlola ilayisense, kufanele uthole kuphela izindlela zokubhenka eziphephile ngo-2021 emakhasino e-inthanethi amasha.
Ingabe amasayithi amakhasino amasha anikeza imidlalo emisha?
Yebo, amakhasino e-inthanethi amasha ezikhathini eziningi ziphathe ama-slot akamuva avela kubadayisi abaphezulu njenge-Netent, i-Betsoft, ne-Playtech. Lawa makhasino adinga ukwakha i-buzz phakathi kwabadlali – futhi ama-slot nemidlalo emisha ngenye indlela yokwenza lokhu.
Ingabe amakhasino akamuva anikeza amabhonasi angcono kunalawo amadala?
Yebo, kuyiqiniso elaziwayo ukuthi amabhonasi okubhalisa anikezwa amakhasino amasha avame ukuba ngcono kakhulu kunalawo atholakala kumakhasino a Amakhasino amasha alambele abadlali – athembela kumabhonasi ajulile nakumahhala ukuze agqame esixukwini. Yingakho amakhasino amasha avame ukuba nebhonasi yediphozithi engekho.
Amakhasino amasha engezwa kangaki ohlwini lwethu?
Sibuyekeza uhlu lwethu ngamasayithi amakhasino akamuva njalo ngenyanga.
Yimaphi Amakhasino Amasha Sha aneBhonasi Enhle Yediphozithi Engekho okwamanje?
Bheka uhlu lwamakhasino amasha anebhonasi yediphozi engekho ukuthola impendulo yalowo mbuzo. Wonke amakhasino akuhlu akhethwe ngabochwepheshe bethu ngemuva kokuhlolwa okunzima nokuhlolwa ngokuphelele. Amabhonasi abhaliwe aphephe ngokuphelele ngo-100% futhi kuqinisekisiwe ukuthi azosebenza.